Afrikaa – Local Insight
Yunaayitid Isteetis Gargaarsa Namoomaa Itti Dabalaa Gaanfa Afriikaaf Kan Kennitu Ta’uu Labsite
April 28, 2022 VOA
Jeneevaa keessatti marii sadarkaa ol aanaa dhimma hongee gaanfa Afriikaa irratti geggessameen Yunaayitid Isteetis doolaara miliyoona $200 ol itti dabaaa naannoo gaanfa Afriikaaf kan kennitu ta’uu beeksistee jirti. Deggersi kunis hongee hamaa ilaalchisee fedhii namoomaaf deebii kennuu baqqattootaa fi kanneen biyya ofii keessatti qe’ee irraa buqqa’an akkasumas kanneen naannoo walitti bu’iinsaa...
April 27, 2022 VOA
Gargaarsaa namoomaa fi misoomaaf kan ooluu deggersii Doolaaraa Biiliyoonii 1.39 ta’u biyyoottaan Gaanfaa Afrikaa Sadiif taasisamuun isaa gabasaameeraa. Gargaarsii guyyaa har’aa taasifamee kun namoottan miiiliyoonii 15 ta’an Itiyoophiyaa, Somaaliyaa fi Keeniyaa keessatti rakkina keessa seenaniif kan oluu yemmuu ta’u balaan hongee biyyoottan kana muudate waggaaootan 40 darban keessaatti isa jalqabaati jedhameera....
Baaydiin Waa’ee Itiyoophiyaa Wixinee Dhiyaate Hubannaan Akka Ilaalan Gaafatamee Jira
April 22, 2022 VOA
WIixiineen yaadaa Itiyoophiyaa tasgabeessuuf dhiyaatee ykn HR 6600 jedhamee fi Itiyoophiyaa keessatti nagaa fi Deemokraasii jajjabeesuuf jedhame dhiyaate 1399 hangam Itiyoophiyaa akka miidhu Bulchiinsii prezidaant Baaydiin hubannaan akka ilaalaniif jarmayaa hawaasa sivilii Itiyoohiyaa keessatti miseensoonni Kaawunsilii gaafatanii jiru. Xalayaa banaa prezidaant Baaydiiniif ergan kanaan yaadii dhiyaate kun Itiyoophiyaa keessatti nagaa busuuf, marii hunda hirmaachisee gaggeessuuf akkasuams gargaarsii...
Dhukkubii KOOVIID Badii Geesisee Qabaatuus Biyyonni Afrikaa Dhukkuuba Sombaa Ittisuuf Maallaqa Ooluu Gaaftaa Jiran
March 24, 2022 VOA
Dhukkuubii Sombaa Sadarkaa Addunyaatti Bitooteessa 24 Yaadatamaa kan oolu yoo ta’u dhaabatti sadrkaa addunyaati dhukkuuboota Edsii Sombaa fi Busaa faccisuuf hundeeffame Gloobaal Fand jedhamu gaaffii dhiyeessee jira. Kunis mootummonni kan waggaatti uummata Miliyoona tokko caalaa ajjeesuu dhukkuuba Somabaa ittisuuf duula gaggeessan akka haareessan kan gaafatee ture. Kan dhukkubii Sombaa keessatti hammaatee...
Hongeen Gaanfaa Afrikaa xiyyeeffanna akka barbaaduu ibsameera
March 9, 2022 VOA
Dubbii himaan Dhaabbata mootummoota gamtoomanii Isteefan Duhaariik waa’iloota gargaarsa namoomaa wabefachuudhaan akka jedhanitti, Itiyoophiyaa keessatti sababa hongeetin kan ka’e namoonni kuma 175,000 qe’ee isaanii gadi lakisuudhaaf akka dirqissifaman ibsaniiru. Dubbii himichii ibsa kaleessa kennan kana keessatti sababa hongee kanan beelladoonni Miiliyoonii 1.5 du’uu akka danda’an dubbachuun isaanii gabaasameera. Dhaabbanii isaanii fi...
Hongee Hamaan Uummata Somaaliyaa fi Itiyoophiyaa Keessaa Mudachuuf Akka Jiru Gabaasame
January 13, 2022 VOA
Somaaliyaa fi Itiyoophiyaa kibba gama bahaa keessatti hongee hamaan uummata miliyoona sadii ol miidhaa kan jiru ta’uu koreen baraarsaa kan sadarkaa addunyaa beeksisee jira. IRCn akka jedhetti biyyoonni gaanfa Afriikaa lama biyyootii addunyaa 20 kanneen waggaa kana rakkoo namoomaa hamaan miidhaman keessaa ti jedha gabaasi Mohammed Yusuf Naayiroobii irraa erge. Itiyoophiyaa...
December 3, 2021 VOA
Vaayrasiin haaraa argamee Omiikroon jedhamu waan nama yaaddeessuu qabu malee kan sodaa uumuu ta’u hin qabu jechuun prezidaantiin Yunaaytid Isteetes Joo Baaydiin dubbatanii jiru.Balalii xayyaaraa Amerikaa fi biyyoota Afrikaa gama Kibbaa gidduu ture dhaabuun koos sirrii dha jechuun falman. Gama kaaniin talaaliin farra dhukkuuba KOOVIID-19 ittisuu ardii Afrikaa haga barbaadamee hin...
Uhuuruu Keniyaataa Mootummaadhaa fi Ummata Itiyoophiyaaf ergaa dabarsuun himame
November 4, 2021 VOA
Prezidaantiin keeniyaa Uhuruu keeniyaataa , hookorri Itiyoophiyaa keessatii baballachaa adeemaa jiru dhaabatee akka mariin jalqabu gaafachuu isaanii daarekteerri Dhaabata gargaarsaa aduunyaa U.S/ USAID Samanntaa Paawer fuulaa Tiwuterii isaanii irratti ibsaniiru. Akka bareeffamnii waajira prezidaanti keeniyaa iraa bahe jedhutti, hookkori amma guutummaa biyyatitti baballachaa adeeme akka fala argatuu hoggantootaa biyyoottan Afrikaa, hoggantootaa...
May 28, 2021 VOA
Itiyoophiyaa fi Eriraan hookkarri Tigiraay keessatti siiviloota irratti geggeessamu akka dhaabatu yoo hin taasisne, uggra dabalataa kan irra kaa’uu maltu tahuu Yunaayitid Isteetis akeekkachiisaa jirti. Kaleessa, Koree Hariiroo Alaa, kan Senetii Yunaayitid Isteetis irratti haala Itiyoophiyaa keessaa yeroo ammaa ilaalchisuun dhuga-bahinsa geggeessame irratti hoogganoonni Yunaayitid Isteetis kana dubbatan. Maricha kan hoogganan...
NAAYROOBII — Dhaabbati baqataa gargaaru UNHCR murtee mootummaan keeniyaa Dadaab fi Kaakumaa cufuuf dabarse ilaalchisee...